Massimo Dutti na-ewetara ụlọ obibi akwụkwọ ọhụrụ SS21: New Edgy | Bezzia
Maria onyekwere | 09/06/2021 18:00 | Kedu ihe m ga-eyi
Massimo Dutti gosipụtara ọhụụ ọhụrụ nchịkọta akụkọ mmiri-ọkọchị 2021. Nchịkọta akụkọ n'okpuru isiokwu New Edgy na-enye anyị atụmatụ maka ụbọchị taa na nke ahụ na-ekere ndị ọzọ na-edezi ya nke mbụ itinye aka na palette eke, ọ bụ ezie na ọ nwere nnukwu nuances.
Mgbe ị lere anya na New Edgy, ihe mbụ na - adọrọ n'anya gị bụ ihe ama ama na uwe ụfọdụ na - ewere dịka uwe ogologo linen, kee uwe elu na akwa akwa. Uwe e mere maka enwe okpomọkụ n'oge nkasi obi.
1 Agba agba
3 Ihe ndị dị mkpa nke Massimo Dutti
Adabara agba akwụkwọ ndị ọzọ bụ mgbanwe mgbe ọ na-abịa na agba, na dị otú ahụ a sara mbara agba palette nke ụlọ ọrụ ahụ kwụrụ na nke a. Acha agba agba agba nke a na-ejikọ ụda ndị na-anọpụ iche na ndị ọzọ dị egwu dị ka oroma, pinks na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
N’ụlọ ebe a na-ebi akwụkwọ ebe uwe ndị ahụ doro anya, a naghị ahụta ihe ndị e ji esiji ákwà. Anyị nwere mmasị na uwe elu na uwe mwụda edobere na-acha ọcha, aja aja na acha anụnụ anụnụ nke ejiri owu na akwa silk mee. Ma karia ka uwe elu na oroma na uda pink, nke eji 100% akwa akwa.
Ihe ndị dị mkpa nke Massimo Dutti
na belted linen bermuda nịịka ha ghọrọ akwa dị mkpa maka Massimo Dutti n'oge a. Na agba ndị na-anọpụ iche, ha dị ọtụtụ, agbanyeghị, anyị enweghị ike wepu anya anyị n'ụdị dị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo na nchịkọta akụkọ a. Anyị nwere mmasị n'echiche nke ijikọ ya na uwe elu na jaket nwere akwa abụọ.
Knitwear bụ isi ihe ọzọ na nchịkọta, ọkachasị uwe mwụda mara mma na ribbed tank n'elu. Tinyere ihe ndị a, a na-ahụkwa uwe elu ma ọ bụ uwe elu nke na-eje ozi dị ka uwe na na agba dị ka beige ma ọ bụ khaki na-ejikọta ihe niile.
Nwere mmasị na atụmatụ ọhụrụ sitere na otu ụlọ ọrụ Inditex?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Massimo Dutti na-enye ụlọ obibi akwụkwọ ọhụrụ SS21: New Edgy